King Zero: August 2013
အဖြူရောင်လွင်ပြင်မှ အမှတ်တရ စာစုများ အမှတ်စဉ်(၈) အမှာစာ
မနုဿတ္တ ဘာဝ ဒုလ္လဘ လူဘ၀သည် ရခဲပေသည်။လူဘ၀သည် အလွန်တန်ဖိုးရှိလှသည်ဟု အများလက်ခံထား ကြပါသည်။မိမိတို့ လက်ခံထားသည့်အတိုင်း တကယ် တန်ဖိုး ရှိအောင် နေ နိုင်ကြပြီလားဆိုတာကို သေချာစမ်းစစ်အဖြေရှာကြ ဖို့လိုပါသည်။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် မိမိတို့ဘ၀ ကိုတန်ဖိုး ရှိစေရန် အမြဲဟောဖေါ်ညွှန်ပြဆို ဆုံးမလေ့၇ှိပါသည်။မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ပြသည့် လမ်းကို မိမိတို့ တ ကယ်လျှောက် လှမ်းနေနိုင်ကြပြီလားဆိုတာသည် မိမိတို့ပေါ်မှာမူ တည်ပါသည်။ လမ်းကောင်းရှိပါ လျက် မိမိတို့ မလျှောက် လှမ်းကြဘူးဆိုလျှင် လမ်းမှာ အပြစ်မရှိ မလျှောက်လှမ်းသူ မိမိတို့မှာ သာ အပြစ်ရှိပါသည်။
မိမိတို့ဘ၀ အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွါးရေးအတွက် လျှောက်လှမ်းကြမည်ဆိုလျှင် မိမိတကယ်ဖြစ်ချင်သော ဘ၀ပန်းတိုင် တစ်ခုချမှတ်ပါ။ပြီးရင်မိမိစိတ်ဓါတ်ကို ရင့်ကျန်ခိုင်မာအောင် အမြဲမွေးမြူပါ။ ဘယ်အရာမဆိုမမွေးမြူပဲမကြီးထွားပါဘူး။တလောက လုံး၇ှိလူတွေကို မေးကြည့်ပါ၊ကြီးပွါးချမ်းသာ ချင်ပါသ လား၊ အောင်မြင်သောသူဖြစ်ချင်ပါသလား၊ တန်ဖိုး၇ှိသောသူဖြစ်ချင်ပါ သလားဆိုလျှင် ၉၉.၉ သည် ဟုတ်ကဲ့ကြီးပွါးချင်ပါသည်၊ အောင်မြင်ချင်ပါသည်၊တန်ဖိုး၇ှိချင်ပါသည်ဟု ဖြေကြပါလိမ့်မည်။ဒါဖြင့် တကယ် အောင်မြင်ကြီးပွါး ချမ်းသာ တန်ဖိုးရှိကြသောသူတွေက လူနည်းစုဖြစ်ပြီး မအောင်မြင်သူတွေ တန်ဖိုးမ၇ှိ သူတွေက များနေရပါ သနည်းဆိုလျှင် အဖြေကရှင်းပါသည်။တကယ်ပန်းတိုင်ရှိပြီး မိမိပန်း တိုင်ကို ရောက် ရှိရေးအတွက် စားလည်းဒီစိတ် အိပ် လည်းဒီစိတ် ထိုင်လည်းဒီစိတ်တွေးလည်းဒီစိတ်ဖြင့် မိမိစိတ် ဓါတ်တွေကို ကြာလေ ပိုမိုရင့်သန်လေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်နေသော သူများသည် သူတို့ကို အဲဒီစိတ်ဓါတ်က ဆွဲဆောင်ခေါ်ဆောင် သွားသောကြောင့် အောင်မြင်ကြခြင်း တန်ဖိုး၇ှိကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့စိတ် ထားဖြင့် တ ကယ် ကြိုး စား သူများ ကား အနည်းစုသာဖြစ်ပေသည်။
မအောင်မြင်ကြသော တန်ဖိုးမ၇ှိကြသော လူအများစုသည် ပန်းတိုင်တွေက များလွန်အားကြီးသည်။မိမိဘာဖြစ်ချင်မှန်း ကောင်းကောင်းမသိ အောင်မြင်တဲ့သူတွေ့ရင် အောင်မြင်ချင်တယ်၊ ချမ်းသာတဲ့သူတွေ့ရင် ချမ်းသာချင်တယ်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူတွေကို တွေ့ရင် တန်ဖိုးရှိချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ဖြစ်ချင်မှုတွေသည် မွန်းတည့်အောင်မခံ တဒင်္ဂ တခဏဖြင့်ကွယ်ပျောက် ကုန်သည်။ဟိုဟာဖြစ်ချင်သလိုလို ဒီဟာဖြစ်ချင် သလိုလိုဖြင့် ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်နေသည်။ဘယ်အရာမှစွဲစွဲမြဲမြဲမ၇ှိ လေတိုက် တိုင်းယိမ်းနေသည်။ ဟိုလူက ဒါဆိုပါသွားသည်။ဒီလူက ဒါဆိုပါသွားပြန်သည်။ဒါပေမဲ့မယ်မယ်ရရ ဒီတစ်ခုကို အားစိုက်ပြီးအား ထုတ်ပါကြိုးစားပါဆို တော့တဆိုက်မက်မက်စိတ်မရှိ ရေသာခိုချင်သည်။ အချောင်လိုချင်သည် ။ရေသာခိုချင်စိတ်အချောင်လိုချင်စိတ်ဖြင့်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုမရောက် နိုင်ပါ။တန်ဖိုးရှိသော သူမဖြစ်နိုင်ပါ။ဒါဆိုရင် မနုဿတ္တ ဘာဝ ဒုလ္လဘ လူဘ၀သည် ရခဲသည် တန်ဖိုး၇ှိ သည် ဆိုသည်မှာ သူနဲ့မဆိုင်တော့ပါ။
အခြားသူများ တန်ဖိုးရှိသောသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းမပါဝင်ခြင်းသည် ကိုယ်နှင့်မဆိုင်ပါ။သူ့ဘ၀သူအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလျှောက်လှမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ကိုယ့်ဘ၀သည်ကိုယ်နှင့်သာဆိုင်ပါသည်။အခုပြောလိုသည်မှာ ဘ၀မှာ တကယ်အောင်မြင်ချင်သောသူများ တကယ်တန်ဖိုးရှိလိုသော သူများ အတွက် ပြောကြားလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။မိမိကိုယ်ကို တကယ် တန်ဖိုး တွေရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်သော အရာများရှိပါသည်။မ်ိမိခန္ဓာကိုယ်မှာ ကွန်ပျူတာလိုပဲ အင်ပွတ် (input)နဲ့ အောက်ပွတ်(output) နှစ်မျိုးရှိပါသည်။မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲကို အင်ပွတ် (input)လုပ်သော အရာများ မှာ နားနှင့်မျက်စိဖြစ်ပါသည်။ မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော တနေ့တာ ၂၄ နာရီတွင် မိမိမျက်စိသည် ဘာတွေဖတ်ပြီး အင်ပွတ် လုပ်နေသလဲ သေချာစမ်းစစ်ပါ။ တန်ဖိုးရှိသော စာပေတွေလား ဒါမှမဟုတ်တန်ဖိုးမဲ့ သောအရာတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်နေတာလား သေချာစီစစ်ပါပြီးထည့်ပါ။ မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော နားသည်လည်း ထိုနည်း လည်းကောင်း ဘာတွေများများနား ထောင်ပြီးထည့်နေသနည်း။တန်ဖိုးရှိသော တရားများလား၊ စာပေဟောပြောပွဲများ လား၊ သြ၀ါဒစကားများလားဒါမှမဟုတ် တန်းဖိုးမရှိသော အတင်းအဖြင်းစကားများလား တန်ဖိုးမဲ့ အသံတွေလား ဆိုတာသေချာစီစစ်ပြီးမှထည့်ပါ။သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဦးနှောက်ထဲ နှလုံးသားထဲကို တန်ဖိုးမဲ့သော အရာများများ ထည့်ထားလျှင် သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှအောက်ပွတ် အပြင် သို့ပြန်ထုတ် ရတော့ မည်ဆိုလျှင် သင်၏ပါးစပ်မှ တန်ဖိုးမဲ့စကားတွေအတင်းအဖျင်းတွေ များများပြောပါလိမ့်မည်။ တန်ဖိုးမဲ့ သော စာ တွေ ကို သင်၏လက်မှ များများရေးပါ တော့မည်။ ဒါဆိုလျှင် သင် သည် ကျိမ်းသေမုချ ကျဆုံးသော သူ မအောင်မြင် သောသူ မကြီးပွါးသောသူ တန်ဖိုးမဲ့သောသူ ဖြစ်ပါ့လိမ့်မည်။
တန်ဖိုးရှိသော စာပေများကို ဖတ်၇ှုခြင်း၊ တန်ဖိုးရှိသော စာပေဟောပြောပွဲများကို နားထောင်ခြင်း၊ တန်ဖိုး၇ှိသော သြ၀ါဒ စကားများကို နားထောင်ခြင်း၊ ပညာရှိများထံမှ အကြံဥာဏ်ကောင်းများ နည်းနာနိသျများ ရှားမှီးပြီး ထည့်ခြင်းမှတ်သားခြင်းများ ဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲ၊ ဦးနှောက်ထဲ၊ နှလုံးသာထဲကိုထည့်ထားမည်ဆိုလျှင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ အောက်ပို့စ် အပြင်သို့ပြန်ထုတ် မည်ဆိုလျှင် သင်၏ပါးစပ်သည် တန်ဖိုးရှိသော စကားများ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောစကားများကို ပြောကြားလာနိုင်ပါလ်ိမ့်မည်။သင် ၏ကလောင်လက်သည်လည်း လူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိသော ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊၀တ္ထု၊ကာတွန့် စသောတန်ဖိုးရှိသော တန်ဖိုးမ ဖြတ်နိုင်သော စာပေများကို ရေးသားဖြန့်ဝေပေးလာနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဒါဆိုရင်သင်သည် လောကမှာ အောင်မြင်သောသူ တန်ဖိုးရှိသောလူများစာရင်းတွင်ဝင်သွားပါလိမ့်မည်။ယခုသင့်ဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိသောလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့ဖတ်မှတ် ထားသော နားထောင်ထားသော တန်ဖိုးရှိအရာများကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရေးသားပေးနိုင်ဖို့ ကလောင်သစ်များ မွေးဖွါးသန့်စင် ပေးရာဌာနဖြစ်သော အဖြူရောင်လွင်ပြင်မှ အမှတ်တရစာစုများစာအုပ်တွင် ဆက်လက်ပြီး ကလောင်များသွေးနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းနိုးဆော်ရင်း……………………………………..
Posted by dhamma at 9:26 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၁)
A K F စက်ရုံမိသားစု၊ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အထူးတရားပွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့၊ မယ်ပရပ်ကွက်။
Posted by dhamma at 2:20 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော် အပိုင်း(၂)
Posted by dhamma at 2:19 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော် အပိုင်း(၃)
Posted by dhamma at 2:16 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၄)
Posted by dhamma at 2:14 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၅)
Posted by dhamma at 2:13 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၆)
Posted by dhamma at 2:11 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၇)
Posted by dhamma at 2:09 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၈)
Posted by dhamma at 2:07 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၉)
Posted by dhamma at 2:05 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ အပိုင်း(၁၀)
Posted by dhamma at 2:03 AM0comments
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်း(၁၁)
Posted by dhamma at 5:25 AM0comments
Posted by dhamma at 11:05 AM0comments
Posted by dhamma at 10:53 AM0comments
A K F စက်ရုံမိသားစု
Posted by dhamma at 10:36 AM0comments
Posted by dhamma at 10:10 AM0comments
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား တရားတော် အပိုင်း( ၆ )
Posted by dhamma at 10:00 AM0comments
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း ( ၄ )
Posted by dhamma at 11:08 AM0comments
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း (၅)
ပထမအကြိမ်မြောက် တရားပွဲ A K F စက်ရုံမိသားစု
Posted by dhamma at 9:10 AM0comments
ဆရာတော် အရှင်ဣဿရိ ဟောကြားတော်မူသော စိတ်ထားကောင်းမှ နိဗ္ဗာန်ရ တရားတော်
Posted by dhamma at 8:12 AM0comments
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း (၁)
Posted by dhamma at 8:08 AM0comments
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း (၂ )
Posted by dhamma at 8:07 AM0comments
မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း( ၃ )
Posted by dhamma at 8:04 AM0comments
Ashin Issariya – aka King Zero – is one of the founders of The Best Friend. He is well-known for his political activities and playedamajor role in the 2007 Saffron revolution. He fled the country and has been in Mae Sot since 2008. Apart from these political activities, King Zero has also been very active in the social field.
King Zero got involved in social projects in 1999, when he started the first library at State Sasana University in Rangoon. “At the time, I started this library to help monks read books; that is why we started it at the university. It is not very common for monks to be involved in projects like foundingalibrary. Later more monks joined us, because we gave them more information. At first they were afraid: the military regime knew about the library and our activities. In Burma, it is risky to be involved in projects likealanguage school and library. And it is difficult to run libraries because of that. Some monasteries were closed. Some monasteries wanted to openalibrary, but were afraid to do so.”
“When I was in Burma, I opened thirteen libraries. It was very difficult to set up libraries under the military junta. People want to read, they really needed books. I decided to open up libraries everywhere. The regime made it difficult for me. I never gave up, though, and still continue to open new libraries. At the moment, we have two libraries in Thailand: one in Mae Sot and one in Chaing Mai. We also teach languages and offer computer classes. My plan is to open upanew library in NoPo refugee camp . I am now collecting and buying books to do that. Our school – 42km – currently has 400 students and needsalibrary too.”
“The goal of these projects is that we want to educate the people. Many Burmese people inside are lacking information, they don’t have the opportunity to read books, there are no libraries. They do not know anything about their country’s situation. They believe in Kamma asapredestination: we are in this situation in this life and we cannot change it.”
Posted by dhamma at 8:34 PM0comments
ကလေးမလေးရဲ့ ပကတိဖြူစင် ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာ
သူမဟာ တချိန်မှာ အနာဂါတ်မြန်မာရဲ့ မိခင်လောင်း
အခုတော့ ပျိုးပင်ဘ၀မှာ ပန်းတွေရောင်းနေရ
စာတွေသင်နေကြရ သမ္မတတွေ ၀န်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်နေကြပေါ့……….
Posted by dhamma at 11:14 AM0comments
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ တရားပြစဉ် လာေ၇ာက်တရားထိုင်ကြသည့် နိုင်ငံခြားသား ယောဂီများ
Posted by dhamma at 9:35 AM0comments
မဲဆောက်အမှိုက်ပုံရှိ ရေးဘေးဒုက္ခသည်များကို မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်မှ သွားရောက်ကူညီလှူဒါန်းပေး
Posted by dhamma at 8:46 AM0comments
Posted by dhamma at 12:11 AM0comments
သိချင်တာများကို လာရောက်ဆွေးနွေး မေးမြန်းကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကျောင်းသားများ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by dhamma at 12:07 AM0comments
Posted by dhamma at 12:04 AM0comments
Posted by dhamma at 12:01 AM0comments
Posted by dhamma at 11:59 PM0comments
အဖြူရောင်လွင်ပြင်မှ အမှတ်တရ စာစုများ အမှတ်စဉ်(၈) အ...
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်...
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော် အပိုင...
မင်္ဂလာရှိသော လူ၊ မင်္ဂလာရှိသော နိုင်ငံ တရားတော်အပိုင်...
မြင့်မြတ်သူတို့၏စိတ်ထားပိုင်ဆိုင်ကြပြီလား အပိုင်း ...
ဆရာတော် အရှင်ဣဿရိ ဟောကြားတော်မူသော စိတ်ထားကောင်းမှ...
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ တရားပြစဉ် လာေ၇ာက်တရား...
မဲဆောက်အမှိုက်ပုံရှိ ရေးဘေးဒုက္ခသည်များကို မိတ်ဆွေေ...
သိချင်တာများကို လာရောက်ဆွေးနွေး မေးမြန်းကြတဲ့ အမေရ...